ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: March 2013
မိသားစုအကြောင်းလေးတွေတောင် မရေးဖြစ်တာကြာပြီ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းလဲတွေမရှိတာကြောင့်လည်းပါတယ် ။ ခုတော့ရေးစရာလေးတွေ ပေါ်လာပြန်ပြီ ။ ကိုယ်က အငယ်ဆုံးသာဆိုတယ် ဆရာကြီးနည်းနည်းဆန်တယ် ပြန်မပြောရဲလည်း တ်ိတ်တိတ်ကလေး တော်လှန်တယ် ။ ပြီးတော့ အမေ့ကို တိုင်တယ် “မေ့....ကိုကြီးက သားရောက်နေတာသိသားနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးလာ ပြီး ကြည့်ရှု့မယ်မရှိဘူး သူက မအားတာက များတယ် ” စိတ်ကောက်တဲ့ လေသံနဲ့ အမေ့ကိုတိုင်တော့ အမေဆိုတော့လည်း မျှတွေးတွေးပေါ့ ။ “သားရယ် သူမအားတာနေမယ် အလုပ်တွေများနေလားမှမသိတာ သား သွားလိုက်ပေါ့ ” လို့ပြောတုန်းက ဖုန်းတစ်ဖက်ကနေ အမေကတော့ လုပ်ပြီ ကျနော်ကြီးပဲ အရှုံးဆိုပြီး အနိုင်အရှုံးတွေ တွက်တတ်သေး ။
သူတို့ကလူဟောင်းဆိုတော့ နေရာဟောင်းရဲ့ အထာကိုကျွမ်းတယ် ။ကိုယ်ကတော့ လူသစ် ပထမတော့ ဘယ်သူ့မှ အားမကိုးဘူးပေါ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး တွေးထားပေမယ့် ကိုယ်တကယ် အခက်ကြုံတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်သွေးသားအရင်းလောက် ဘယ်သူမှ ကိုယ့်အနားမှာ မရှိကြပါဘူး ။ ကိုကြီး အိမ်ကို သွားလည်တဲ့နေ့က ဘာမှ ဖုန်းကြိုမဆက်ပဲသွားတာ ။ အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ နားနေတဲ့ သူက ကိုယ့်ကိုမြင်တော့ အံ့သြသလိုလိုနဲ့ ။ ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ဆိုးစရာ စ်ိတ်ကောက်စရာရှိပြီဆို ဖုန်းအဆက်သွယ်မလုပ်ပဲ တစ်ယောက်တည်းနေပစ်လိုက်ကော ရန်လည်းမဖြစ် စကားလည်းမများပဲ အကြာကြီးအဆက်ပြတ်နေကြတာမျိုး အမေကတော့ ခဏခဏကိုပြောတာ “နင်တို့ကလည်းဟယ် သင့်သင့်မြတ်မြတ် ကိုမရှိကြဘူး ” လို့ ဆူတယ် ။ ညီအစ်ကိုတွေ ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျ အေးဆေးနေတာပဲ ။ အဲ့တာကြောင့် အမေ့ကို ခဏခဏပြောတာ ကိုကြီးနဲ့ အစ်ကိုငယ် မတွေ့ကြတဲ့အခါ အမေက စိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင် ကျနော်က ပြန် အားပေးရတယ် ““ အမေကလည်း သူတို့ညီအစ်ကိုတွေက မတွေ့ခင်သာ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျ ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘူး လိုက်ပြီး စိတ်ညစ်မနေနဲ့”” လို့ ပြောရတယ် ။ အဲ့လိုပဲ ကျနော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလည်း ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး စိတ်ဆိုးစရာတွေဆိုတာ ဘယ်နားရောက်မှန်းမသိ ။
ကျနော်ရောက်တော့ အိပ်နေတဲ့သူ့ကို “နေမကောင်းလို့လား” ဆိုပြီး အနားသွားမေးတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ပြီးတော့ ပွပလဲ နေတဲ့ အခန်းထဲ ကမန်းကတန်းလိုက်သိမ်းနေတယ် ။ ကျနော်က ရှုပ်ပွနေတာ မကြိုက်တတ်မှန်းသိတော့ ပြီးတော့ သူ့မိန်းမကို ဖုန်းဆက်နေတာကြားတယ် ““ နင့်မောင်ရောက်နေတယ် မြန်မြန်ပြန်လာအုံး စားစရာလည်း ဘာမှမရှိ အိမ်လည်း ပွ နေတယ် ” တဲ့ ။ သိပ်မကြာခင် သူ့မိန်းမ ရောက်လာတော့ ကျနော်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းလေးတွေ မြန်မြန်ချက်လို့ ညီအစ်ကိုတွေ ထမင်းလက်ဆုံ မစားရတဲ့ ရက်တွေကို မရီးက သင့်မြတ်စေခဲ့တယ် ။ပြီးတော့ မရှိတဲ့ကြားက မုန့်ဖိုးကလေး အတင်းထိုးပေးလို့ ။ ကိုကြီးနဲ့ မရီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်တဲ့ ညနေက အမေ့ကို သတိရပြီး မျက်၇ည်ဝဲမိသေး အမေသိရင် ၀မ်းသာမှာဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်းတွေးနေတာ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆိုတာ ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ပစ်မကောင်းတဲ့ အသီးတွေပဲ ဆိုတာကိုပေါ့ ။
အစ်ကိုငယ် ကျပြန်တော့ မိန်းမ နဲ့ မောင်နှမတွေကြား ကြားညှပ်လို့ သူကတော့ အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေစေချင်တော့ ။“ မင်း အစ်မနဲ့သာ အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းစမ်းပါ ငါ့ညီရာ သူနဲ့သာအဆင်ပြေလို့ကတော့ င့ါညီတို့အတွက် အစ်ကိုက ဖြည့်စည်းပေးပြီးသားပေါ့ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတဲ့ ဘ၀က လူလွတ်တွေလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာ ညီလည်း အိမ်ထောင်ကျမှ ဒါတွေ နားလည်မှာ ”” တဲ့ ။သူပြောတာလည်း ဟုတ်တော့ဟုတ်သား ။အခန်းခဏခဏ ပြောင်းရတာ ရှက်တယ်ဆိုပြီး မျက်နှာပျက်နေတဲ့ ကျနော့်ကို စာနာလို့ အစ်ကိုက အထုတ်တွေ ကို သူတစ်ယောက်တည်း ထမ်းပိုးလို့ ။ အစ်ကို့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဆိုးလို့ ငါဘာလို့များတစ်လွဲမာနတွေသိပ်ထားခဲ့တာလည်းဆိုပြီးတော့ပါ ။
အခုအခန်းမဟုတ်ပဲ အခန်းဟောင်းလေးမှာတုန်းက နေရတာ အဆင်မပြေ ညည အရက်သမားတွေဆူပြီး အိမ်က လမ်းကြမ်းကြမ်းလျှောက်ကြရင် လှုပ်တယ် ။ အဲ့အခန်းပြောင်းတဲ့နေ့က အစ်ကိုငယ် လိုက်ပြောင်းပေးမယ် ။ညကျတော့ သူဖုန်းဆက်လာတယ် “ညီ...မင်း အခန်းတံခါးသေချာပိတ်နော် သူများတံခါးလာခေါက်၇င် ရမ်းမဖွင့်နဲ့ကြားလား ”” ကျနော်မနေရဲတာ သူသိတော့ နောက်နေ့ကျ ဖုန်းဆက်လာပြန်ကော ပိုက်ဆံ မနှမြောနေပါနဲ့တော့လေ သင့်တော်တဲ့အခန်းထပ်ရှာပြီး ပြောင်းကြတာပေါ့ တဲ့ ။အခန်းသစ်လေး ပြောင်းတော့ အစ်ကို့ကို သနားတာနဲ့ အသိတစ်ယောက်ကို အကူညီတောင်းပြီးပြောင်းဖြစ်ကြတယ် ။ အခန်းသစ်လေးရတော့ ၀မ်းသာအားရ ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ ကျနော်ပျော်နေသလို သူလည်းစိတ်ချသွားတဲ့ အသံနဲ့။
ပိတ်ရက်မှာ သူ့အခန်းသွားလည်တော့ ကျနော့်အတွက် အကြော်အလှော်လေးတွေ လုပ်ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ် ။ ပြီးတော့ ကားဂိတ်ကို စက်ဘီးကလေးနင်းပြီး လိုက်ပို့တုန်းက အငယ်တုန်းက ခလေးဘ၀တောင်ပြန်သတိရမိပါရဲ့ အငယ်တုန်းကလည်း အစ်ကို ကျနော့်ကို အဲ့လို စက်ဘီးပေါ်တင်ပြီး ခဏခဏ တင်နင်းခဲ့ဖူးတယ် ။မုန့်ဖိုးပေးဖို့ကျ ကပ်စေးနည်းတယ်ဆိုပြီး စကားနာထိုးခံရတဲ့ အစ်ကိုက မြို့ကြီးမှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဖိနပ် တစ်ရံကို ၂ နှစ်လောက်စီးတာတွေ့တော့ လှတာမြင်ရင် ရှေ့နောက်မကြည့်ပဲ ၀ယ်မိတဲ့ ကျနော့်ကို ကျနော်တောင် ရှက်မိပါရဲ့ ။ တက်စ်စီ စီးဖို့ ဝေလာဝေး ဖရီးကားစောင့်စီးတဲ့ အစ်ကိုတို့လင်မယားကြည့်ပြီ သူတို့ ချွေတာခြင်းကို နားလည်စာနာမိတော့တယ် ။ “တစ်ချိန်ကျ ကိုယ့်မိဘနားပြန်နေနိုင်ဖို့ ငွေကတော့စုရမှာပေါ့လေ ရတုန်းလေး မင်းအစ်မဆိုလည်း အလုပ်လွှတ်ချိန်လေး စက်ရုံမှာ ကော်ဖီလေးဖျော်ရောင်းသေးတာပဲ ပိတ်ရက်ဆိုလည်း ဘယ်မှမသွားပဲ အိမ်မှာပဲ နားနေလိုက်တယ် အပြင်မထွက်ရတော့ ဘာမှမကုန်တော့ဘူးပေါ့ကွ ” သူ့တွက်ကိန်းနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပဲ ။
““ ငါ့ညီလည်း ငွေကလေးချွေတာစု ကြားလား ခု အခြေတကျလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ နောက်နှစ်သင်္ကြန်လောက် မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင် ရွာပြန်ပြီး အလှူအတန်းလေး လုပ်ကြတာပေါ့ ” တဲ့ ကျနော်လည်း ဟုတ်ကဲ့လို့သာ ဖြေလိုက်တယ် ပြီးတော့ ကျနော်တို့တွေ ဒီ့ထက်ပိုပြီး အိမ်မဝေးပါရစေနဲ့လို့ အခါခါစိတ်ထဲ ဆုတောင်းမိပါရဲ့ဗျာ ။ သွေးဟာ ရေလောက်မကျဲပါဘူး အရေးကြီးသွေးနီး ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေဟာလည်း အလွယ်တင်မှတ်လာတာလို့ ကျနော်တော့မယူဆဘူး ။ ကိုယ်ကသာ စိတ်ဆိုးမယ် စိတ်ကောက်မယ် ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေတွေ့ အစ်ကိုတွေအကြောင်းတိုင်တတ်တယ် အစ်ကိုတွေကတော့ ကျနော့်အကြောင်း တိုင်တာမရှိ ။ ခုထိ အစ်ကိုတွေက ကျနော့်ကို မင်းနဲ့ ငါ တောင်စကားမဆိုကြပါပဲ ကျနော်က ဘာလို့ သူတို့အပေါ်ဆိုးနေပါလိမ့်နော် ။
အစ်ကိုကြီးကို သူ့အပေါင်းသင်းတွေက “ ကိုကြီးညီ အငယ်ကောင်က အသောက်စားလည်းကင်းတယ်ကွ၊ ပညာခံလေးကလည်းရှိတော့ အဆင်ကိုပြေလို့ ” အရက်ဝိုင်းမှာ မြှောက်ပြောတာလား ဘာလားမသိပေမယ့် သူကတော့ ပြုံးဖြီးလို့ဆိုလား မရီးက တစ်ဆင့််ပြန်ပြောပြတာ ။ အစ်ကိုငယ်ကျပြန်တော့ သူ့မိန်းမကို စကားနဲ့လေပြေထိုးတာက အရှိန်ကလေး ခပ်ရရပေါ့ “ ငါ့ညီလေးရှိတော့ ငါ့မိဘ စားရတာပေါ့ကွ တို့တွေ ခလေးကြီးတစ်ကောင်လုံး အမေတို့ဆီ ပို့ထားတာ ဟုတ်တိပတ်တိလည်း မထောက်ပံ့ဖြစ် အခု ငါ့ညီ လိုအပ်နေချိန်မှာ ငါကတော့ ကူညီရမှာပဲ အေး မင်း မကျေနပ်ရင်ပြော ငါ အိမ်ဖော်က ဆင်းရမလား ” တဲ့ သူက မူးရင် အဲ့လို ဂျစ်တွန်းတွန်းတာတွေ တော်တော် တော်တယ် ။
အရင်ပို့စ်တွေ ရေးဖူးတုန်းကလိုပဲ ပြန်သတိရမိတယ် သူတို့တွေဟာ ကျနော့်အတွက်တော့ အဆင်သင့်ရှိနေကြတဲ့သူတွေပါပဲ သူတို့တွေ မူးမူး ဆိုးဆိုး ပေါ့ သူတို့ညီလေး ကျနော် ကြောင်ချေး ကိုတော့ သူတို့ အကြွင်းမဲ့ ချစ်ကြလေရဲ့ ကျနော်တို့ညီအစ်ကိုတွေဟာ ခွဲခြားမရတဲ့ အမေက မွေးတဲ့ အမေချစ်သားတွေဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ ညီနောင်သံယောဇဉ်တွေ ခိုင်မြဲနေကြတုန်းပါပဲ ။
ဘလော့ရပ်ဝန်းကြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေတယ် အဲ့လိုဖြစ်တိုင်း တဂ်ပို့စ်လေးတွေကအပျင်းထူနေကြသော ဘလော့ဂါတွေကို ပုတ်နှိုးစမြဲပါပဲ ။ ကျနော်လည်းရေးချင်တာတွေများ ပြောချင်တာတွေများပေမယ့် ဘာမှလည်းဟုတ်တိပတ်တိမရေးဖြစ်ဘူး ။ တဂ်ပို့စ်လေးတွေဆိုရင်တော့ပျော်တယ် သိပ်စဉ်းစားစရာမလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရေးလို့ရတာမို့ပါ တဂ်ပေးတဲ့ အစ်မသက်ဝေ ကိုကျေးဇူးဗျ ။ ကျနော်ရေးချင်တဲ့စာဆို အဲ့လိုပဲ ရေးချင်တယ်ပြောမိကော နာမည်တပ်မခံရပဲ ရေးဖို့ကျတော့ အောင့်သလားလို့ ဘလော့ဂါဆိုတာလည်း အထာကြီးတွေနဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မို့လား အဲ့အထဲ ကိုယ်လည်းပါတယ်း)
(၁) ဘ၀ဆိုတာ ထင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေ ဘယ်တော့မှ ထပ်တူမကျနိုင်ဘူးဆိုတာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေ ရင့်ကျက်လာတာနဲ့ အမျှပိုပိုသိလာတယ် ။ တက်ကျိုးရင် လက်နဲ့လှော် ဒီနေရာရောက် ဒီ က ကွက်နဲ့က ဟိုနေရာရောက်တော့ ဟို က ကွက်နဲ့ က ပေါ့ ဖြေသာရင် နေသာပေမယ့် ဖြေသာဖို့ အားယူရတာက ခက်တယ် ။
(၂) နေ့ရက်တွေ ကုန်မြန်တာကို ထူးဆန်းနေတော့တာ ငါ ဘာမှလည်း မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့ အတွေး ခဏခဏ ၀င်နေမိတယ် ။
အင်းး… မောင်မျိုး မင်းတစ်ခုခုတော့ လုပ်တော့ ယောင်ပေပေ လုပ်မနေနဲ့ ။
အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ် အဆိုးကြီးလည်းမဟုတ် ၆ နှစ်ကျော်လောက် တက်လည်းမတက် ကျလည်းမကျ ပဲ ထိန်းထားတဲ့ ၄၅ ကီလိုဟာ ၂ ကီလိုလောက်ကျသွားလို့တော်တော်စိတ်ပျက်နေတယ် ။ အိပ်ခန်းမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်တာလည်းပါတယ် ။ ခုတော့ နေစရာ လည်းအဆင်ပြေ အလုပ်ကလေးလည်းအဆင်ပြေပြီမို့ ပြန်ဂရုစိုက်နေတယ် အသီးရွက်တွေနဲ့ ကြက်ဥကို အမျိုးမျိုးကြော်စားတယ် ။အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်တယ် ။ ရေများများသောက်နေတယ် ။ စိတ်ကျန်းမာရေးကတော့ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ပါပဲ ပုံသေမဟုတ် သေချာတာကတော့မရူးသေးဘူး ရူးရင်လည်း အချစ်ရူးပဲ ဖြစ်ချင်တာ ကျန်တာမရူးပါရစေနဲ့ ချစ်ဖူးတယ် အိုးဟိုး ကိုယ်မလွယ်ဘူးရူးနိုင်တယ် အားဟား အာဟား ( ဦးချစ်ကောင်း) :P
စာအုပ်တွေက မဲဆောက်မှာတုန်းက စင်ကလေးနဲ့ကို ရှိတာ ပြောင်းတော့ ယူလို့အဆင်မပြေတာနဲ့ မယူခဲ့ရဘူး ။ ကော်ပုံကြီးနဲ့ ထည့်သိမ်းခဲ့ရတယ် ။ ခု ပါလာတာ ၄ အုပ်ပဲရှိတယ် ။ အဲ့တာတွေအပြင် အီးဘွတ် ( အညာသူ အညာသား- ခင်ခင်ထူး၊ စာပေလူကြမ်းသမား အောင်သင်း ၊ ၀င်းဝင်းလတ် - အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲ ) အဲ့တာတွေ ဖတ်နေတယ် ။
နေရာသစ်နေတစ်နေရာ …. အားလုံးအသစ်တွေပဲမို့ အလွဲတွေလည်း အများကြီး မိုးပျံရထားစီးတော့ လွဲတာလေးပြောပြအုံးမယ် အသ်ိတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားတာ ဘုန်းကြီးလူနာတစ်ပါး ဆေးလာစစ်တာနဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် စကားပြန်သွားလုပ်ပေးတာပါ ကားတွေမှားစီးပြီးး တော်တော်ဝေးဝေး ရောက်သွားတယ် ။ တက်စ်စီ စီးမယ်ဆိုလည်း ကားကြပ်တာနဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ အဲ့တော့ ရထားတက်စီးရတာပေါ့ ဘယ်နားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး ဘယ်လို စီးရမှန်းလည်းမသိပါဘူး အဲ့တော့ ကောင်တာမှာသွားမေးတယ် အဲ့အစ်ကိုကလည်း အိပ်ငိုက်နေပြီး အကြွေစေ့ပဲ လဲပေးတယ် ပထမ ၁၀ ဘတ်စေ့ ၂ စေ့ထည့်တယ် ဘာမှလည်းထွက်မလာ သူ့ကိုပြန်ကြည့်တယ် သူက ၄ ချောင်းထောင်ပြတယ် အဲ့တော့ ကဒ်ကလေးထွက်လာတယ် ရုပ်ရှင်ထဲကကြည့်ထားတဲ့အတိုင်း ခပ်တည်တည်ထည့်လိုက်တယ် ကဒ်ကလေးပြန်ထွက်လာတယ် ဒါက ပြသနာမဟုတ်သေး ဆင်းတော့ ကိုယ်ဖြတ်ထားတဲ့ လက်မှတ်နဲ့ ပိုပြီး တစ်ဘူတာ ပိုစီးမိသွားတယ် ဘယ်လိုထည့်ထည့် ကဒ်က ပြန်ထွက်လာပြီး တံခါးက ပွင့်မလာ ဘယ်အပေါက်က ဆင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး လိုက်ကြည့်သေးတယ် ဘယ်မှာမှ ထွက်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ် တော်တော် လည်တဲ့ဟာတွေ ။ ဆိုတော့ ကောင်တာသွားပြန်မေးတော့ ငါးဘတ် လိုနေတာနဲ့ ထပ်ပေးလိုက်ရတယ် အဲ့တော့မှ တံခါးက ပွင့်တော့တယ် ။ ကိုယ့်ချင်း ကိုယ့်ချင်းတွေတောင် ငါးဘတ်လေးနဲ့ တွက်ကြတဲ့ဟာတွေမပြောချင်တော့ဘူးး ။
ကောင်းကောင်း ရဲ့ ညီမျှခြင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ West Life အဖွဲ့ရဲ့ Try Again ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ ။
ကျနော်က ကဗျာတွေဆို အလွတ်မရတာများတယ် အဲ့တော့ ကိုယ့်ပါသာ ပေါက်ကရရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို တစ်ခါတလေ ဘောင်တွေများတဲ့ လောကကြီးကို အရွဲ့တိုက်ချင်တိုင်း လုပ်ချင်ရာ လုပ်ပစ်လိုက်ချင်တိုင်း ရွတ်မိ တွေးမိတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့ ..
အလုပ်လည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး လူတွေအများကြီး တိုးကျိတ်နေတာကို ကြည့်ပြီး မောမောလာတိုင်း တောခြံကလေးတစ်ခြံ အသင့်တင့်အိမ်ကလေးတစ်လုံး နဲ့ အပင်တွေစိုက် စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တော့တယ် အဖော်ပါရင်ပိုကောင်းမယ်း) ( တိုင်ပင်ဖေါ်တိုင်ပင်ဖက်ရတာပေါ့လို့ ပြောမလို့ပါ )
မရီးလုပ်ထားပေးလိုက်တဲ့ ငါးခြောက်စင်းကြော်၊ အစ်မကြော်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကြော် ထမင်းကို လိုသလောက်ချက် ပြီးတာနဲ့ စားလိုက်တာပါပဲ အပြင်စာတွေ အရင်ကစားပေမယ့် ဈေးများပြီး လူတွေကလည်းတိုးနေရတာနဲ့ မစားဖြစ်တော့ဘူး မာမားထုတ်တွေတော့ အများကြီး ၀ယ်ထားလိုက်တယ် ပျင်းရင် အဲ့တာပဲပြုတ်စားလိုက်တယ် ။
သောက် - မနက်ဆို ကော်င်္ဖီသောက်တယ် ညဆို ရေခဲ ၈ ဘတ်ဖိုးဝယ်ပြီး ဆဲဗင်းက ၀ယ်ထားတဲ့ စတော်ဗယ်ရီ ဖျော်ရည်ဗူးကို ဖျော်သောက်တယ် အရမ်းကြိုက်လို့ ။
နဂိုကတည်းက သနားဓာတ်ခံရှိတဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုက လွဲပြီး မျက်လုံးထဲ သနားစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူ တော်တော်များများကို သနားတယ် ။
မဲဆောက်က အိမ်ကလေး ညနေပိုင်းဆို နေ၀င်ချိန် သိပ်လှတဲ့ နေရာလေးပေါ့ ညပိုင်းဆို အိမ်အပြင်မှာ ဖုန်းပြောလို့ကောင်း ၊ စကားထိုင်ပြောလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေး ခုလည်းးတစ်ယောက်တည်း နေရပြန်တော့ အဲ့အိမ်ကလေးမှာတုန်းက အမေရယ် အဘရယ် တူကလေး ၂ယောက်ရည် ပြီးတော့ ကျနော်ရယ် ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့ အိမ်ကလေးကို လွမ်းတယ် ။
၁) ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာတွေ အတိတ်ဆိုးဆိုးတွေ လမ်းကြမ်းတွေအကြောင်း ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးခဲ့ပြီပဲလို့ ဆရာကြီးလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မေ့လျော့ပစ်နေရတာ ။အကြောခံရတာတွေ ကိုလည်း မေ့ပစ်လို့ အဲ့လူတွေကိုတောင် သနားသလိုလိုဖြစ်လို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော မပါသွားတာကကိုပဲ ကျေးဇူးတင်စရာလို့ ဖြေသိမ့်တွေးတတ်လာတယ် ။ တော်တော်များများကို မေ့ပစ်ထားတာပါပဲ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကော ဖြစ်နေတာတွေကိုကော ဖြစ်လာမှာတွေကိုကောပေါ့ မေ့ပစ်သင့်လျှက်နဲ့ မမေ့ပဲ ထားတာတွေကိုလည်း အတင်းမေ့ပစ်ဖို့မကြိုးစားဘူး အဲ့တာတွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့ ။
စကားလုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ မုသားသုံးတတ်တဲ့သူတွေ မြင်တိုင်း ၊ နာမည်ကြီးဖို့ အတင်းလုပ်နေတာတွေမြင်တိုင်း ၊အမှန်ကို သတ္တိရှိရှိမပြောတော့တဲ့ အရင်လို စိတ်ထဲရှိတာကို ၀ိုင်းဒိုင်းမကျဲတော့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ခါးသက်တာပဲ ။ ဒါပေမယ့် အခါးက လေရောဂါကိုပျောက်စေတယ်တဲ့ ကျနော်က လေနာရောဂါရှိတော့ အခါးက ကျနော်နဲ့တည့်တယ် ခါးခါးလေးလည်းကောင်းပါတယ် ။
ပြောရင်လည်း ယုံမှာမှ မဟုတ်ပဲ မပြောတော့ဘူး အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မောင်မျိုး ဘာပြောပြော မယုံတော့တဲ့ ပိတ်သတ်ကြီးကို မုန်းဒယ် ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါအကောင်သေးသေးပိန်ပိန်လေးနဲ့ အလုပ်တွေ တော်တော်စုံအောင်လုပ်နိုင်တာပဲလို့ သနားရင်း ချီးကျူးမိတယ်
စာသူခိုးတွေ ။ အရင်တုန်းကလည်း ကြားနေရ မြင်နေရတာပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲ့တာတွေမြင်တိုင်း အထင်သေးမိတုန်းပဲ ကိုယ့်မယားမဟုတ်ပဲ အသားယူပြီး ပေါင်းနေကြတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ် ။
မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးးတဲ့ အရပ်
မရှိပါဘူးလေ ပြီးတော့ မမုန်းတတ်အောင်လည်း အမြဲကြိုးစားတယ် ။
မနေ့ကတင် ၀ယ်လာတဲ့ အိပ်ယာခင်းအပြာလေးပါ ။
အချိန်တစ်ချိန်ထဲကိုပဲ မြန်တယ်လို့ထင်သွားလိုက် နှေးတယ်လို့ထင်သွားလိုက်နဲ့ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ကိုပါ တကယ်ဆို ဒီအရွယ်ဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ တည်ငြိမ်မှုလေးရှိသင့်ပေမယ့် အပြောင်းလဲတွေ များတဲ့ ကာလမှာ စိတ်တွေကလည်း မြန်လိုက် နှေးလိုက် ဖြစ်နေတတ်တာကို စိတ်ပျက်မိပါတယ် ။
ကြည်နူးစရာအချိန်တွေကို ပြန်တွေးရတာကို ကြိုက်တယ် ။ မိသားစုနဲ့ ဆုံတဲ့အချိန်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်ကချစ်ခင်တဲ့သူတွေအကြောင်း မကြာမကြာ ပြန်တွေးရတာကို နှစ်သက်စွဲလန်းပါတယ် ။
အများကြီးပဲ ပြောရင် ကုန်မှာတောင်မဟုတ် ….း)
အသိတစ်ယောက်ပြောတာ မှတ်မိနေတယ် ဟုတ်လား မဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူး ယုံတမ်းစကားတွေ ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာ ဒါပေမယ့် တိုက်ဆိုင်နေလို့ ဦးအောင်ဇေယျက ကျိန်စာတိုက်ထားတယ်တဲ့ သောင်းရင်းမြစ်ကို ဖြတ်ဖူးတဲ့သူတွေဟာ နောင်လည်း ဒီနေရာကို မကြာမကြာ ရောက်ရမယ်တဲ့ ။ ခု ကျနော်လည်း အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တာလားမသိ သောင်းရင်းရဲ့ ဒီဘက်အခြမ်းမှာ ကျနော်ရောက်နေပါတယ် .
စစ်မှန်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေအကြောင်း ။
တဂ်ပို့စ်တွေက ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆိုးသာမှ ဆိုးတော့ ကျနော်တို့ ပြန်မတွေးဖြစ်တာလေးတွေကို တဂ်ပို့်စ်လေးတွေက ပေးတယ် ။ တစ်ချို့မေးးခွန်လေးတွေက ညဏ်စမ်းဖြေရသလို တစ်ချို့ကျတော့ ပျော်စရာလေးဖြစ်လိုက် တစ်ချို့ကျပြန်တော့ လေးလေးနက်နက်တွေးပြီး ဖြေရနဲ့ အတွေးတွေ အများကြီး တစ်ချိန်တည်းဖြစ်စေတယ် ။
ဆက်ပြီးတော့ ကျနော့်ကို စားလုံးပေါင်းတွေ ပြင်ဖို့ အမြဲပြောတဲ့ ရှမ်းလေး နေ၀သန် ကိုတဂ်ပါတယ် ။
အိမ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အတွက် ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် နားခိုရာ အမောပြေရာ နေရာတစ်ခုပဲ ။ ဒါပေမယ့် အဝေးရောက်သူများ အဖို့တော့ အိမ်မဟုတ်ပေမယ့် အခန်းလေးတွေဟာလည်း အမောပြေရာ နေရာတစ်ခုလို့ ကျနော်တော့ ယူဆတယ် ။ ရွာမှာတုန်းက တဲအိမ်ကလေးပဲမို့ အခန်းရယ် မယ်မယ်ရရမရှိ အစ်မ တွေအတွက် အိမ်တွင်းခန်းလေး တစ်ခုရယ်သာ ကျနော်ကတော့ အမေ နဲ့ အဘကြား တိုးကပ်အိမ်လို့ပေါ့ ။ ၂ တန်းကျောင်းသားတုန်းက အစ်မရဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ နေရင်း ကျောင်းတက်ခဲ့ရတော့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ်မို့ ညဘက်ကျ ခုံကလေးတွေ စီ ပြီးအိပ်ရတော့ အဲ့တုန်းက ကျနော် အရမ်းတောင့်တမိတာ ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးတစ်ခုရယ် အိပ်ရင်း ခုံပေါ်က မလိမ့်ကျချင်တော့ဘူးလေ ကျောပြင်းကျယ်ကျယ်ချလို့ရတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပြီး ။ ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အထိ ဆိုင်ကျဉ်းကလေးထဲမှာ အဲ့လိုအိပ်ခဲ့ရတာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော်လို့ ဆိုရက်ကြလေမလား ။
အလုပ်ဝင်တော့ အလုပ်ကနေရာပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဟောကြီးဖြစ်နေသလိုမျိုး ပြီးတော့ လှေကားအတက်ဆင်းနဲ့နီးတော့ နေရတာမသင့်တော်တာနဲ့ ကိုယ့်ပါသာ အခန်းလိုက်ကာတွေဝယ် အခန်းလေးဖွဲ့လို့ အခန်းကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ် စာအုပ်စင်ကလေးရှိမယ် အ၀တ်တန်းတစ်ခုရှိမယ် တိုလီမိုလီ ထည့်ဖို့ ခြင်း ၃ ခြင်းလောက်ရှိမယ် အဲ့တုန်းက ကျပြန်တော့ ကျနော်လိုချင်တာ အခန်းတံခါးလေးပါတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခန်း လဟာပြင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်ကြီးမကြိုက်တော့ပြန် တစ်ခါတလေ ဘော့စ်သားလေးက ကိုယ့်အခန်းကိုဝင်လို့ ပေါင်တာမှုန့်တွေ ဖျူးတဲ့ အခါဖျူး စာအုပ်တွေ ဖွလိုဖွနဲ့ ဒေါသတွေ ငယ်ထိပ်တက်ဆောင့်ပေမယ့်လည်း သည်းခံရတာ အခါခါ မရှိမယ့် ရှိမယ့် ငွေတို ငွေစ ကလေးလည်း ပျောက်လိုပျောက်ပေါ့ အဲ့လိုအခါများဆို လောကကြီးကို စိတ်ကုန်ချက် မရှိပါဘူးဆို ငွေက ပျောက်တော့ ခံစားချက်က သူတောင်းစား ခွက်ပျောက်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့တောင် ဆင်နေမလားမသိ ။
မနှစ်က အမေ နဲ့ အဘ လာနေတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်ကလေးတွေ ပြည့်လို့ပေါ့ တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းမှာ ချစ်တဲ့ အဘ နဲ့ အမေ ရှိတယ် မနက်မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်ထိ မပျင်းစေရမယ့် တူဆိုးလေး ၂ကောင်ရှိမယ် ။ ဒီ ခံစားချက်ကလေးကလည်း လပိုင်းလောက်သာ စားစရိတ် နေစရိတ်ကြီးတဲ့ နေရာမှာ ကြာကြာရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း အခြေနေကမပေးပြန် မိဘတွေ ပြန်တော့ တိုက်ခန်းလေးမှာ တစ်လလောက်ထပ်နေလိုက်သေး ထမင်းအိုး မှိုိတက်နေတာကိုလည်း ဆေးချင်မှဆေးတယ် အိပ်ယာလည်း ခေါက်ချင်မှ ခေါက်တယ် ထမင်းစာရင် ချက်ရမှာ ပျင်းလိုက်တာ ဗိုက်လည်းဆာလိုက်တာဗျာလို့ လေသံပစ်လိုက်တာနဲ့ ခြေရင်းခန်းက သိပ်သဘောကောင်း သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အန်တီကြီးက ထမင်းစားဖို့ အတင်းလာခေါ်ကော တစ်ခါ နှစ်ခါလောက် မူပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျ အန်တီကြီး အိမ်မှာ ပဲသွားသွားစားလိုက်တော့တယ် ဟင်းချက်စရာလေး ၀ယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ပေ့ါ ။
နေရာသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလာပြန်တော့ အလုပ်မရခင်စပ်ကြား ညီမ၀မ်းကွဲလေးတွေအခန်းမှာ နေရပြန် ညီမ အပျိုလေးတွေဆိုပြန်တော့ သူတို့လည်းနေရတာမလွတ်မလပ် ပြီးတဲ့အခါ သူတို့ဘဲဘဲတွေဆီက ညဘက်ဖုန်းလာတဲ့အခါကျ စကားပြောရတာ မလွတ်လပ်ဘူးထင်ပါ့ ““ နင်ကလည်း ပြောရတာသဘောမပေါက် ငါတို့ အစ်ကိုရောက်နေလို့ဆို စကားပြောလို့မလွယ်ဘူး နောက်မှဆက်တော့ ဒါပဲ ”” ညီမတွေက ကိုယ့်ကို အားနာလို့ အိပ်ရေးပျက်မှာစိုးလို့ စကားမပြောကြပေမယ့် ကိုယ်က ဘယ်သူချစ်ခြင်းမှ ခွဲချင်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးး) ။ အိမ်ရှင် သူဌေးက အခန်းတွေ ဖွဲ့ထားလိုက်တာများ နေရာလွတ်တောင်မရှိ ဖုန်းပြောလည်းမလွတ်လပ် စားပြီးလည်း အခန်းထဲ ချက်ပြုတ်တော့လည်း အခန်းကျဉ်လေးထဲ ဒီ့ထက်ဆိုးတာက တိုက်ခန်းတစ်ထပ်မှာ အိမ်သာ ရေချိုးခန်း တစ်ခန်းပဲရှိတော့ သုံးရတာ လုံးဝ အဆင်မပြေ သိပ်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ ရေချိုးလည်းတန်းစီစောင့်ရ အိမ်သာဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော်က နည်းနည်း ကြီးကျယ်တော့ ခေါင်းမြီးကြီးခြုံလို့ပေါ့ ကိုကြီးကျယ်အတွက် သင်ခန်းစာတွေပဲထင်ပါ့ဗျာ တစ်ခါတလေ ကျနော်တို့ ဘ၀မမေ့ဖို့ ရွာမှာတုန်းက ခြုံတောတိုးခဲ့ရတာတွေကို ပြန်အမှတ်ရဖို့ လို့အောင့်မေ့ပြီး စိတ်ကိုဖြေလျှော့ရပြန် ။
တူတော်မောင် က ပြောမရ ဆိုမရ ဒီဦးလေး ဘေးကနေ တွတ်ထိုး ( စကားအစပ်မပြတ် ဆုံးမ) နေနိုင်မှ တော်ကာကျတာ အဲ့တော့ သူ့နဲ့ နီးနီးနားနားနေရအောင်ဆိုပြီး အခန်းထပ်ပြောင်းရပြန် တကယ်တော့ ကျနော်က အခန်းပြောင်း ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ရတာလောက် စိတ်ရှုပ်တာမရှိဘူး ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀ က ဘာမှအတည်မကျသေးတော့ ပြောင်းရပြန်ပါပေါ့ ကိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခန်းတွေမဟုတ်ပေမယ့် အဝေးက ပြန်လာတိုင်း ကိုယ့်အခန်းလေးထဲရောက်လိုက်ရရင်ကိုပဲ စိတ်ချမ်းသာလို့ ။နှီးနီးနားနား အလုပ်ရှာ အလုပ်ကရပြန်တော့ ကိုယ်နဲ့မကိုက်ပြန် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာတွေကိုထပ်ရှာရပြန်တာပေါ့ အလုပ်ကလေးရတဲ့ဆီ ရွှေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ သူတို့က တစ်နေရာ ကိုယ်ကတစ်နေရာ တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ ဘ၀ကလည်း ငြီးငွေ့စရာကောင်းချက် ပြောမနေချင်တော့ဘူး အဖော်ရှာဖို့ဆိုတာကလည်း အစွမ်းအစ ကမရှိ အဲ့တော့ နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာကို ဖြတ်သန်းဖို့ ကျနော် အခန်းရှာပုံတော် ဖွင့်ရအုံးမယ် ။
အခန်းထဲက နွေးထွေး လုံခြုံမှုမျိုးကို ကျနော်နှစ်သက်တယ် အဝေးရောက်သူများအဖို့ အခန်းလေးတစ်ခန်းဟာ မိမိအိမ်ရဲ့ လုံခြုံမှုမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ခပ်ဆင်ဆင် နွေးထွေးမှုမျိုးကို ပေးနိုင်တယ်လို့ ခံစားရတယ် ။ ကျနော်တို့တွေ အခန်းတွေ ဘယ်လောက်များများအထိ ပြောင်းနေရအုံးမှာပါလိမ့် ကြင်နာသူမရှိတဲ့ အခန်း အဖော်မရှိတဲ့ အခန်းမှာ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတစ်ယောက် အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ် အဲ့အခန်းက ကျနော့်ကို ခံစားမှုအသစ်တွေ ပြီးတော့ ညည ကျနော်မပျင်းဖို့ ရေစက်ကျသံပဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်က အသံတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ဘေးအခန်းတွေက စူးစမ်းအကြည့်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားမှု အသစ်တွေ ရစေနိုင်မှာပါ ။ ပြီးတော့ စားရေးပျင်းနေတဲ့ ကျနော့်အာရုံတွေကို ကျနော့်အခန်းသစ်လေးက စားရေးချင်စိတ်တွေ ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါရဲ့ ။ အခန်းသစ်ကလေးကို ရောက်တဲ့အခါ ခံစားမှု အသစ်လေးတွေ ဖောက်သည်ချပါအုံးမယ် ။
at 11:29 PM9comments